HARGEYSA(P-TIMES) – Wada hadalo gaar ah oo ay yeesheen Xisbiyada mucaaradka iyo Muxaafidka ee Somaliland kuna saabsanaa arrimaha doorashooyinka ayaa lasoo gaba-gabeeyey, waxaana laga gaaray heshiis hordhac ah oo ay sadexda Xisbi kala saxiixdeen, ayna goobjoog ka ahaayeen Midowga Yurub oo dhaqaalaha Doorashooyinak bixinaya.
Sadexda Xisbi ee Somaliland ayaa ku heshiiyey sadex qodob oo muhiim u ah geedi socodka doorashooyinka, iyadoo xooga la saaray sidii ay waqtigooda ugu dhici lahaayeen doorashooyinka labada golle iyo deegaanka oo dhawaan qorsheysan.
Sadexda qodob ee lagu heshiiyey ayaa kala ah.
1- In Doorashada ay qabtaan Gudigii hore oo lagu daray 3 Xubnood oo ka socda dhanka Beesha Caalamka, si ay ugu qancaan dhammaan xisbiyada mucaaradka.
2- In ay Doorashadu dhacdo dhammaadka sannadkan, gaar ahaana bisha September, taas oo ay si furan uga qeybgalayaan dhammaan Asxaabta mucaaradka ah.
3- In Mushahaarkii halkii uga sii socdo Guddiga cusub ee uu hogaaminayo Gudoomiye Ina Riyo-Raac oo ay aad iskugu dhaw yihiin Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
Heshiiskan, waxaa goobjoog ka ahaa Gudoomiyayaasha golaha Wakiilada & Guurtida ee Somaliland, waxaana sidaas oo kale in ay wax kasta soo dhawaadaan door ka ciyaaray Ergayga garka ah ee Midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo labo habeen kusugnaa magaalada Hargeysa.